Politika momba ny tsiambaratelo sy ny politika Cookie | RayHaber | raillynews
HomeRailway NewsPolitika amin'ny fiainana an-tserasera sy politika
Politika amin'ny fiainana an-tserasera sy politika
Ry mpampiasa malala,
RayHaber Tongasoa eto amin'ny tranokala,
Ity manaraka ity "Fifanekena miafina", RayHabermifehy ny fanomezana ny fampahalalana sy ny serivisy nomena ireo mpampiasa manan-danja anay.
RayHaberAzafady ampiasao ireo fampahalalana nangonin'ireo mpampiasa voasoratra anarana sy vahiny mitsidika ny tranokala misy karazana famakafakana. RayHaber zarao amin'ireo mpiara-miasa aminy ity fampahalalana ity. Na izany aza, ny mailaka sy ny fampahalalana momba ny tena manokana dia tsy ho zahana amin'ny mpiara-miasa na orinasa, fikambanana na fikambanana hafa raha tsy eken'ny mpampiasa.
RayHaber tsy mamoaka mailaka, anarana, solon'anarana, laharana an-tariby ary misy fampahalalana nampidirina nandritra ny fisoratana anarana tao amin'ny tranokalan'ny mpampiasa voasoratra anarana sy ny vahiny, ary tsy mizara izany amin'ny mpiara-miasa na orinasa, orinasam-panjakana, andrim-panjakana na fikambanana hafa raha tsy misy mpampiasa mamaritra azy amin'ny fomba hafa.
RayHaber 3 dia hampahafantatra ny mombamomba anao manokana amin'ny alàlan'ny toe-javatra manaraka sy ny fomba fiasa araka ny lalàna. misokatra amin'ny fety.
a.) Raha misy fangatahana an-tsoratra avy amin'ireo manampahefana ara-dalàna,
b.) RayHabermiaro sy hiaro ny zon'ny fananana
c.) Araky ny fitsipika ankatoavinao araka ny fepetra fampiasana.
RayHaberNy fampahalalana momba anao manokana izay voatahiry dia tsy hita aminao fotsiny. Izany fampahalalana izany dia tsy amidy, hofan-trano na fifanakalozana amin'ny andrim-panjakana na fikambanana hafa. Afa-tsy voalaza ao amin'ity "Fifanekena miafina", 3. tsy zaraina amin'ny isam-batan'olona. RayHaber dia mandray ny fepetra rehetra azo atao amin'ny fanatanterahana ireo fepetra nampanantenaina tamin'ity fifanarahana ity.
RayHaber fampahalalana voatahiry ao amin'ny tontolo tsy miankina. RayHaberdia mampiasa ny karazana fenitra indostria rehetra hiarovana ny tontolo iainana.
Manan-jo hanova sy hanova izay mombamomba anao ampidiranao ianao mandritra ny fisoratana anarana amin'ny fotoana rehetra. RayHaber dia mendrika ny hamafa na mampiato ny kaontinao raha tsy maharaka io "Fifanekena miafina" io sy ny "Fifanarahana serivisy".
Noho ny toetran'ny Internet dia afaka mivezivezy amin'ny Internet ny fampahalalana tsy misy fepetra fiarovana ary mety raisina sy ampiasain'ny olona tsy nahazo alàlana. Fahasimbana nateraky ny fampiasana sy fampiasana an'io RayHabertsy andraikitry ny.
Amin'ny tranga sasany, ny fampahalalana tsy an'ny tena manokana dia azo angonina. Ity karazana fampahalalana ity dia ohatra amin'ny karazana navigateur amin'ny Internet ampiasainao, ny rafi-piasananao, ny rohy mankany amin'ny tranonkalantsika na ny anaran'ilay tranonkala afaka manome ny dokambarotra.
Ny fampahalalana dia apetraka amin'ny solosainao rehefa mitsidika ilay tranokala ianao. Ity fampahalalana ity dia ho amin'ny endrika cookie na rakitra mitovy ary hanampy antsika amin'ny fomba maro. Ohatra, ny mofomamy dia ahafahantsika mampifanaraka ny tranokala sy ny doka mifanaraka amin'ny tombontsoanao sy ny tianao. Saika ny mpampiasa Internet rehetra dia manana safidy hanala ireo mofomamy amin'ny kapila mafy anananao, mba hisorohana azy ireo hanoratra, na handray hafatra fampitandremana alohan'ny hamonjena azy ireo. Raha mila fanazavana fanampiny dia mijoroa ireo rakitra fanampiana sy fampahalalana momba ny fampiasana anao.
Ny adiresy IP anao dia ampiasaina amin'ny fitazonana ny tranokala sy ny mpizahatany mandeha, mitantana ary mamaha ireo olana. Ny adiresy IP anao dia entina hampahafantarana anao.
Ity tranonkala ity dia manome rohy amin'ny tranonkala hafa. Ny tsiambaratelo dia tsy manan-kery afa-tsy ato amin'ity tranonkala ity ary tsy mandrakotra ireo tranonkala hafa. Ny politika sy ny fampiasana ny tranokala mifandraika amin'ny fampiasana ny rohy ao amin'ity tranokala ity sy ireo tranonkala hafa ampiasaina dia manan-kery. Ny soso-kevitrao dia mamaky ny fitsipika momba ny fiainana manokana sy ny fampiasana ny tranonkala amin'ireo tranonkala hafa miaraka amin'ny rohy amin'ity tranonkala ity.
Ny fampahafantarana manokana na orinasa, adiresy e-mail, statistika ary ny mombamomba ireo mpitsidika mpanjifa mampiasa ny fotodrafitrasa dia tsy zaraina amin'ny olon-kafa.
Ireo tranonkala misy ireo tranokala dia voatazona ho tsiambaratelo afa-tsy amin'ireo fampiharana azo atao amin'ny fahitalavitra ofisialy (biraon'ny mpampanoa lalàna, Biraon'ny Informatika momba ny fiarovana). Ny tranokala Access dia voatahiry mandritra ny andro 180.
Ny tsikera mpitsidika, ny mombamomba ny mpitsidika, ny fampahalalana momba ny fitsidihana (IP, ny timestamp, ny mpampiasa) dia tazonina ho tsiambaratelo ao anatin'izany ny mpiasa News System.RayHaber manan-jo hanova ny vaovao rehetra amin'ity lahatsoratra ity. Amin'ny fampiasana ity tranonkala ity, ianao dia raisina ho nanaiky izay rehetra ary ny fanovana rehetra amin'ity "Assurance privé".
Ny zon'ny karazan'entana rehetra toy ny kaody, vaovao, sary, dinidinika RayHaber.com an'i. RayHaberNy lahatsoratra, ny fitaovana, ny sary, ny rakitsary, ny sary, ny horonan-tsary, ny endrika ary ny fandaharana amin'ny vohikala .com dia arovan'ny lalàna 5846. ireo RayHaber.com mety tsy adika, zaraina, ovaina, navoaka amin'ny fomba rehetra tsy misy alalana an-tsoratra momba ny .com. Ny fandikana sy fampiasana dia tsy azo atao raha tsy misy alalana ary tsy mamaritra ny loharano.
RayHaber manaja ny tsiambaratelo momba anao sy ny mpitsidika anao ary mampanantena ny hanaraka ny fitsipika napetraka amin'ireto:
Fivoriambe BC1 (Fifanarahana momba ny fifanarahana fifanarahana amin'ny fitrandrahana ny Bosphorus Tube)
Ny tetikasam-pandehanana an-dalamby miaraka amin'ny tsiambaratelo dia tonga amin'ny fahazavana
Lasa politika indray ny lalamby
Ny lalamby dia nanjary politika mifandraika amin'ny antoko
Nivadika ho politika ny lalamby ary naverina indray
Minisitra Arslan: "Nanao lalam-baravarana ho politika izahay"
Lasa politika ny lalamby
Minisitry ny Turhan: Nanao lalamby ho an'ny politikam-panjakana izahay
Ny fifanekena momba ny fanorenana ny tranokalan'ny seranan'i Balçova dia nosoniavina tamin'ny farany
Bursa Yenişehir fifanarahana fifanintsanana haingam-pandeha miara-miasa amin'ny YSE-Tepe Partnership
Tetikasa Marmaray CR3 Fifanarahana: Gebze Halkalı Ny fanatsarana ny latsabato ambanivohitra:…
Ny Konya Cable Carline Project Contract dia nanao sonia
Draung Contract Contract
Androany amin'ny tantara: 15 Febroary 1893 Ny Orinasa Railway Anatolian ile
Ny fifanarahana Ankara Metros dia nanao sonia